Sinocare ine makore 19 zviitiko muBGM indasitiri kubvira payakavambwa muna 2002, ndiyo hombe BGM yekugadzira kambani kambani muAsia uye yekutanga yakanyorwa muropa glucose mita inogadzira kambani muChina, ichitsaurira hunyanzvi hwebiosensor tekinoroji, kusimudzira, kugadzira uye kushambadzira nekukurumidza kuongororwa zvigadzirwa zvekuyedza. Muna 2016, mushure mekubudirira kuwanikwa kweNipro diagnostic Inc. (yava kunzi Trividia Health Inc.) uye PTS Diagnostics Inc. Sinocare yave nyika yeNo. 5 muropu wemagazi eglucose yemamita uye imwe yemakambani anotungamira muIPO indasitiri mu nyika.
Nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kune vanhu vane chirwere cheshuga nezvimwe zvirwere zvisingaperi kuvabatsira kuvandudza hupenyu hwavo.
Inotungamira nyanzvi yeshuga manejimendi muChina uye nyanzvi yeBGM pasirese.
Vakapihwa "2020 China Yakanakisa Vashandirwi Makambani Mubairo"
Yakagamuchirwa chitupa chekunyoresa chitupa uye kubvumidzwa kwekugadzira muna 2004. Yakapasa ISO: 13485 yeEU TUV uye yakagamuchira chitupa cheEC muna 2007.
KUZIVA PASI POSE
Yakanyorwa naForbes seimwe yeAsia's 200 "Yakanyanya Pasi Pebhiriyoni" Kambani mu2015 senzvimbo huru yekugadzira BGMS muAsia.
Wakawana wepasi rose wechitanhatu ropa glucose mita bhizinesi. Yakapinda inotungamira musasa weBGMS mupasi rose.
MUTUNGAMIRIRI MUBHUKU RINO
Sinocare Lu Valley Biosensor Manufacturing Facility iri muChangsha National High-Tech Industrial Development Zone yakavhurwa muna 2013. Nenzvimbo dzakakomberedza 66,000 m2, fekitori yedu inova hombe yekugadzira Ropa Glucose Monitoring System (BGMS) muAsia.
Bhizinesi redu rinofukidza nyika 135 nematunhu epasi.
Kupfuura 63% OTC share uye 130,000 mafammesi muChina.
Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira glucose yeropa, lipids yeropa, ketone yeropa, glycosylated hemoglobin (HbA1c), uric acid uye zvimwe zviratidzo zveshuga.
Seimwe yemapurojekiti ekuratidzira eNational Biomedical Engineering High-Tech Maindasitiri Chirongwa, Sinocare yakagamuchira rutsigiro rwemari kubva kuNational Innovation Fund kanoverengeka, ndokupasa ISO: 13485 yemhando yepamusoro sisitimu sisitimu uye chitupa cheEuropean CE muna 2007.
NYANZVI YEMAHARA DZESHABHARI
Mumakore gumi nemashanu apfuura, edu akarurama, anodhura, uye ari nyore-kushandisa-glucose glucose yekuongorora masisitimu akagamuchirwa zvakanaka nezvikamu zvese zvevatengi muChina, neanopfuura 15% yeshuga inozviongorora vanhu vachishandisa zvigadzirwa zveSinocare. Tinogona kuzvitutumadza tichiti takabudirira kudzidzisa nekusimudzira iro glucose glucose kuzviongorora kwevanhu vane chirwere cheshuga muChina.
Nekudaro, kuve neyeropa glucose yekutarisa system ingori nhanho yekutanga. Kuti uwane chinangwa chekudzora shuga yeropa zvinobudirira, vanhu vane chirwere cheshuga vanofanirwa kudzidza kuyedza glucose muropa, nguva yekuyedza, kangani kuyedza, uye zvekuita nedhata. Kunze kwezvo, madyiro uye kurovedza muviri zvinokanganisa sei iro rega ropa glucose danho rinofanirwa kutarisirwa sechikamu chey equation futi. Kubatsira vanhu vane chirwere cheshuga kuti vanzwisise zvese zvakakosha zvehutachiwana manejimendi zvinowirirana zvizere nechinangwa chedu, "Kubva Ropa Glucose Meter Anosimudzira kuenda kune Diabetes Management Nyanzvi".
Ichi chinangwa chinokurudzira munhu wese paSinocare: isu takaendesa mashuga eropa glucose ekuongorora pamwe nehunyanzvi hwemberi tekinoroji, takagadzira vaongorori vakawanda kuti vape ruzivo rwakawanda nezve chirwere cheshuga, takagadzira chipatara chekuchengetedza chirwere cheshuga kuti tivhare loop pakati pevanachiremba, varwere, varapi , uye vadzidzisi veshuga. Pakupedzisira, tichaumba chirongwa cheshuga manejimendi eco-system uye nekupa mhinduro yekuvandudza hupenyu hwevanhu vane chirwere cheshuga, kurerutsa kudyidzana pakati pevanoona nezvehutano nevarwere, nekuvandudza hupfumi hwehutano hwenzanga yedu.